XOG: Hogaamiye laga qaarijiyay Shabaab,ka dib dagaal ka dhacay.. - iftineducation.com
XOG: Hogaamiye laga qaarijiyay Shabaab,ka dib dagaal ka dhacay..
aadan21 / December 25, 2014
iftineducation.com – Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bakool Max’ed Isxaaq Xasan oo la hadlay Idaacada Risaala ayaa ka warbixiyay dagaal deegaanka Buula-xaawo ku dhexmaray Al-shabaab iyo Ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay gudoomiyaha in dagaalka qasaaro ay ku gaarsiiyeen Al-shabaab oo Labo askari kaga dhaawaceen halka Sarkaalkii aaga dagaalka u qaabilkasanaa Shabaabna ay dileen,sida uu hadalka u dhigay,isagoona hadalkiisa intaasi raaciyay dhankooda askari ka tirsan Dowlada Federaalka dagaalka uu kaga dhintay.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Max’ed Isxaaq Xasan ayaa ku sheegay magaca sarkaalka Shabaab ay dagaalka ku qaarijiyeen Max’ed Cumar.
Dagaalka oo shalay gelinkii danbe ka dhacay deegaanka Buula-xaawo 30-km u jira degmada Bardaale ayaa hadana dib u bilowday saakay aroortii kaasi oo mar kale fooda isdaray.
Ugu danbeyntii gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bakool ayaa shaaca ka qaaday in hada ciidamada Federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin deegaanka lagu dagaalamay.
RIIX HALKAAN KA DHAGEYSO CODKA HOGAAMIYAHA
Khamri cabista iyo Carabta, warbixin naxdin iyo yaab leh oo lasoo saarey
VIDEO: Gaari Malaayin Dolar sidey oo shil galey & lacagti oo hawada gashey